ECG Sensor ပါတဲ့ Samsung Galaxy Watch Active2ကို ကြေညာ – DigitalTimes
Samsung Galaxy Watch Active2ရဲ့ ထူးခြားချက်က Rotating Bezel အစား Digital Bezel ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Digital Bezel ဆိုတာက တကယ့် မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင် မဟုတ်ဘဲ OneUI Software က ဖန်တီးထားတဲ့ အတုအယောင် မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မျက်နှာပြင်ရဲ့ ဧရိယာကို ပိုကျယ်လာစေပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အမျိုးအစားက Super AMOLED ဖြစ်ပါတယ်။ ၄၀ မီလီမီတာနဲ့ ၄၄ မီလီမီတာ မော်ဒယ် နှစ်ခု ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ၁.၂ လက်မနဲ့ ၁.၄ လက်မ မျက်နှာပြင်တွေ အသီးသီး တပ်ထားပါတယ်။
အလူမီနီယမ် ကိုယ်ထည် နဲ့ Stainless Steel ကိုယ်ထည် နှစ်ခု ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ၂၀ မီလီမီတာ လက်ပတ်ကြိုးကို ဖြုတ်လဲနိုင်ပါတယ်။ သင့် အဝတ်အစား အရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Watch Face တွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ 8 LEDs ပါလာတဲ့ Optical Heart Rate Reader ကလည်း ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ECG စွမ်းရည်လည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ၃၉ မျိုးနဲ့ အိပ်စက်မှု အခြေအနေတွေကို တိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်။
IP68 စံနှုန်းရှိပြီး ရေကူးရင် ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ရေအနက် ပေ ၁၃၀ အထိတောင် ဝတ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို Gorilla Glass DX+ နဲ့ ကာကွယ်ထားပါတယ်။ တရားထိုင်တာကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ပါပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပါ တိုင်းတာပေးပါတယ်။ Exynos 9110 Chipset , 768MB RAM , Tizen OS တွေ ပါပါတယ်။
LTE Version ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပြီး 1.5GB RAM ထည့်ထားပါတယ်။ Galaxy Flagships တွေအတွက် Camera Remote အဖြစ်လည်း စမတ်နာရီကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ကျမှ ကြိုတင်မှာယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ၂၆ ရက်မှာ ရောင်းချပေးမှာပါ။
•	40mm aluminum – $279.99 (Rs. 19,830 approx.) / € 299 (Rs. 23,710 approx.)
•	40mm stainless steel – € 399 (US$ 446 / Rs. 31,635 approx.)
•	44mm aluminum -$299.99 (Rs. 21,245 approx.) / € 319 (Rs. 25,295 approx.)
•	44mm stainless steel – € 419 (US$ 469 / Rs. 33,225 approx.)
•	40mm LTE stainless steel – € 449 (US$ 502 / Rs. 35,605 approx.)